सीएनसी लेथिंग भनेको के हो? PTJ हार्डवेयर इंक।
घर > सेवा > सीएनसी Lathing
CNC लेथिंग भनेको के हो?
कम्प्युटर संख्यात्मक नियन्त्रण (सीएनसी) को भूमिका बढ्दै छ, एकाधिक सटीक मशीनिंग प्रक्रिया र उपकरणहरू मार्फत एकीकृत गर्दै - खराद सहित। आफैंले, एउटा खरादले मेसिनलाई आकार दिन्छ र धातु सहित विभिन्न सामग्रीहरूको हार्डवेयरको काम गर्दछ। सीएनसीको शक्ति संग, यो प्रक्रिया शुद्धता र दोहोरिन सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, जसले जटिल कम्पोनेन्टको उत्पादन सुधार गर्दछ। कामका बारे थप जान्नुहोस् - साथै फाइदा र प्रयोगहरू - तल सीएनसी लेथ मेशिनहरूको।
कसरी CNC खराद काम गर्दछ
सीएनसी लेथसको आलोचनात्मक कम्पोनेन्टहरू समीक्षा गर्नु आवश्यक छ उनीहरूको पछाडिको काम बुझ्न। तिनीहरूको सुविधाहरू समावेश: urre बुर्ज: यसमा संलग्न भई तपाईंको काट्ने उपकरण वा कटरलाई निगरानी गर्दछ।
Uck चक: तपाईंको उत्पाद सामग्री होल्ड गर्दछ, जसलाई एक सहायकको रूपमा पनि चिनिन्छ।
Ide स्लाइड: तपाईंको बुर्जलाई सटीक कटौतीको लागि बहु अक्षहरू चालू गर्न अनुमति दिँदछ।
Ter कटर: आकार दिन्छ वा तपाईंको उत्पाद सामग्री काट्छ।
● गार्ड: CNC खरादको कार्य क्षेत्र संलग्न गरेर तपाईंको अपरेटरलाई सुरक्षित गर्दछ।
Face इन्टरफेस: तपाइँको अपरेटर वा प्रोग्रामर तपाइँको सबै CNC खराद मेशिनको प्रक्रियाहरू प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
सीएनसी लेथस कसरी काम गर्छ भनेर चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नानुसार छ:
१. सेवाकर्ताले कम्प्युटर-अनुदानित डिजाइन (सीएडी) वा कम्प्युटर-सहायता प्राप्त मर्मत निर्माण (सीएएम) कागजात अपलोड गर्दछ।
२.The अपरेटरले आवश्यक सामग्री र कटर सम्मिलित गर्दछ।
The.गार्ड बन्द हुन्छ र खराद अपरेटरबाट स्वीकृति पछि काम सुरु गर्दछ।
The. स्पिन्डल, कटर र बुर्जले समन्वयमा काम गर्दछ तपाईंको ब्लूप्रिन्टको अनुसार तपाईंको उत्पादनलाई आकार दिन।
समाप्त गरेपछि, अपरेटरले सामग्री हटाउँछ र कुनै सम्भावित त्रुटिहरूको लागि यसलाई निरीक्षण गर्दछ।
CNC खरादका लाभहरू
सीएनसी लेथसको प्रयोगले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, समावेश सहित:
● शुद्धता: CNC को परिशुद्धता अतुलनीय छ, बितेका वर्षहरूमा म्यानुअल लेथ प्रक्रियाहरूभन्दा बढी। ठूला पैमानेमा सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूका लागि, यो महत्त्वपूर्ण लाभ हो जुन लागत र दक्षतामा सकरात्मक परिणाम लिन सक्छ। Eat पुनरावृत्ति: सीएनसी लेथ मेशिनको त्यो अतुलनीय सटीकता उच्च प्रजनन क्षमतामा अनुवाद गर्दछ। तिनीहरू लगातार तपाईंको CAD वा CAM कागजात पुन: उत्पादन गर्न सक्छन् परम्परागत खराद को त्रुटिहरू हटाउन र तपाईंको सामग्री खरीद अनुकूलन। ● उपयोगिता: कार्यस्थलमा प्रविधिको परिचयले प्राय जसो प्रयोगकर्ताहरू ढिलो गर्न सक्छन्। सीएनसी लेथसका निर्माताहरूले यसलाई पहिचान गरे, त्यसैले किन उनीहरूले आफ्नो उपकरणहरू प्रयोग गर्न सजिलो ईन्टरफेसको सुविधाका लागि निर्माण गरेका छन् जसले अपनन दरहरू सुधार गर्दछ र सिक्ने वक्रको कारण सम्भावित त्रुटिहरूलाई कम गर्दछ।
Uc उत्पादकता: सीएनसी लेथ्ट फाइन्सको सटीकता, दोहराव्यता र उपयोगिता सबैले उत्पादन प्रक्रियालाई समर्थन गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताको लगानी अधिकतम पार्छ वित्तीय र समयको दृष्टिकोणबाट, जसले अन्य क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्छ।
सीएनसी लेथ मेशीनको अनुप्रयोग
उद्योगहरूमा, निर्माण देखि यातायातसम्म, CNC खराद मेशिन धेरै उत्पादन गर्नका लागि उपयोगी छ, सहित:
● बन्दूक ब्यारेल
Ue क्यू लाठी।
● बेसबल ब्याट
● र अधिक यदि तपाईं सीएनसी लेथको शुद्धता मार्फत अनुकूल उत्पादन सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो टीमले मद्दत गर्न सक्दछ।
ट्रस्ट PTJ कारखाना, Inc सीएनसी Lathing को लागी
PTJ कारखानामा, हाम्रो ईतिहास र अनुभवले दश दशक भन्दा बढी र उद्योगहरूको एक श्रृंखला समावेश गर्दछ। अनुकूलन सटीक मेशिन भागहरू र हाम्रो आईएसओ 9001 ००१: २०१ acc मान्यता प्राप्त गर्नका साथै हाम्रो उन्नत टेक्नोलोजीसहित 2015 35 भन्दा बढी मेशिनहरूको लाइन-अप उत्पादनमा हाम्रो विशेषज्ञताको साथ, हामी साना, मध्यम र ठूला स organizations्गठनहरूको विश्वसनीय छनौट - फोरच्युन 500०० सहित। कम्पनीहरु। PTJ कारखाना, Inc. को सटीकता र विशेषज्ञताका साथ तपाईको गुणस्तर मापदण्डहरु पुर्‍याउनुहोस्। आज हामीलाई सम्पर्क गरेर।
कैफियत: CNC मिलिंग सेवा,CNC Turning सेवा,सीएनसी ड्रिलिंग सेवा